ထွက်ရှိဖို့အချိန်နီးကပ်လာပြီဖြစ်တဲ့ Motorola G-family နဲ့ E-family စမတ်ဖုန်းအသစ်များ – AsiaApps
Motorola ရဲ့ G-family စမတ်ဖုန်းအသစ် Moto G6, G6 Plus, G6 Play နဲ့ E-family စမတ်ဖုန်းအသစ် E5, E5 Play တို့ထွက်ရှိဖို့အချိန်နီးကပ်လာပြီဆိုတဲ့သတင်းဟာတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ရက်ကပဲထွက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ G-family ရဲ့ စမတ်ဖုန်း အကြောင်းသတင်းဟာ ဖေဖော်ဝါရီလ အလယ်လောက်ကတည်းကထွက်ရှိနေတာဖြစ်ပေမယ့် E-family အတွက်သတင်းကတော့ အခုရက်ပိုင်းမှထွက်ရှိလာတာပါ။
Moto G6, G6 Plus နဲ့ G6 Play တို့ဟာ ဖြန့်ချီနိုင်ဖို့အအတွက် ထိုင်းနိုင်ငံမှာအတည်ပြုစစ်ဆေးခံပြီးပြီဖြစ်သလို Moto E5 နဲ့ E5 Play တို့ဟာလည်းဖြန့်ချီနိုင်ဖို့အတွက် အင်ဒိုနီးရှားမှာ စစ်ဆေးခံပြီးပြီဖြစ်ပါတယ်။ G-family နဲ့ E-family စမတ်ဖုန်းအသစ်တွေကို အာရှနိုင်ငံတွေမှာ ဉီးဆုံးစတင်ဖြန့်ချီသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။
Moto G6, G6 Plus, G6 Play တို့ရဲ့စျေးနှုန်းပိုင်းနဲ့ Specification ပိုင်းတို့ဟာတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ လယ်ကထွက်ရှိခဲ့တဲ့ သတင်းထဲမှာဖော်ပြခဲ့ ပြီးပြီဖြစ်ပေမယ့် E5, E5 Play အတွက်ကတော့ ဖုန်းရဲ့မျက်နှာပြင်အချိုး 16:9 ဖြစ်နေတဲ့သတင်းသာထွက်ရှိသေးတာဖြစ်ပါတယ်။ ထွက်ရှိလာမယ့် ဖုန်း model ၅ မျိုးလုံးဟာ Motorola ရဲ့နောက်ဆုံးထွက် စမတ်ဖုန်းတွေဖြစ်တာကြောင့် OS ပိုင်းကို Android ရဲ့နောက်ဆုံး Oreo Version နဲ့ Stable ဖြစ်နေအောင်ဖန်တီးပေးထားမယ်လို့ ယုံကြည်ထားလို့ရပါတယ်။ ထွက်ရှိမယ့်အချိန်ကိုတော့ ဧပြီလအတွင်းဖြစ်မယ်လို့ခန့်မှန်းထားလို့ရပါတယ်။
Moto G6 Play (XT-1922-1) render#Motorola #MotoG6Play pic.twitter.com/iRysaKdqMs
— ? ? ? ? (@bang_gogo_) March 13, 2018